DEG DEG+DAAWO:Qaraxii Buuhoodle oo lugaha la galay Taliyaha Ciidamada Somaliland & Xog Culus oo banaanka timid kadib markii…. – Puntlandtimes
DEG DEG+DAAWO:Qaraxii Buuhoodle oo lugaha la galay Taliyaha Ciidamada Somaliland & Xog Culus oo banaanka timid kadib markii….
BUUHOODLE(P-TIMES)-Dhowaan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaa ka dhacay qarax khasaare geystey oo lala beegsaday sarkaal katirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya horayna uga baxay ururka Al-shabaab iyo wasiir katirsanaa maamulka Khaatumo. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Qaraxaasi ayaa waxaa ka soo baxay tuhuno kala duwan waxaana waxgaradka gobolka Cayn ay sheegeen inay ka dambayso xukuumadda Soomaaliland oo u aragtay in ragga qaraxaasi kudhintay ay taageero u ahaayeen howlgalka maamulkaasi looga xoraynayo gobolka Sool.
Xog kale ayaa soo baxday kadib markii taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland uu taleefan u soo dhacay xilli uu la shirsanaa siyaasiyiin ka socota gobolka Sool, waxaana loo sheegay in qaruxu uu dhacay ayna raggaasi kudhinteen, wuxuuna codsaday raggii la joogey inay banaanka uga baxaan.